स्थान: घर » पोष्ट गर्दै » तार समाचार » शुक्राणु गुणस्तर र सेल फोन प्रयोग बीच नयाँ लिङ्कहरू
सेलफोनहरू आजकल सर्वव्यापी छन्, विशेषज्ञहरूले लगातार यन्त्रको फाइदा र विपक्षमा तर्क गरिरहेका छन्। तर के सेल फोनले पुरुषको प्रजनन क्षमतालाई असर गर्न सक्छ? कोरियाको पुसान नेशनल युनिभर्सिटीका वैज्ञानिकहरूले भर्खरै शुक्राणु एकाग्रता, व्यवहार्यता, र गतिशीलता र सेल फोन प्रयोग बीचको सम्बन्धको बारेमा अनुसन्धान गरे। तिनीहरूका नतिजाहरू, भिभो र इन भिट्रो डेटामा एकरूप हुन्छन्, पुरुष सेल फोन प्रयोगकर्ताहरूका लागि चेतावनीको रूपमा काम गर्छन् जो आफ्नो शुक्राणुको गुणस्तर सुरक्षित गर्न चाहन्छन्।
सेल फोनले संसारलाई नजिक ल्याउन सफल भएको छ, धेरै कठिन समयमा जीवनलाई सहनशील बनाउन। तर सेलफोनका पनि बेफाइदाहरू छन्। तिनीहरूले स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। यो किनभने सेल फोनले रेडियोफ्रिक्वेन्सी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक तरंगहरू (RF-EMWs) उत्सर्जन गर्दछ, जुन शरीरद्वारा अवशोषित हुन्छ। 2011 को मेटा-विश्लेषणका अनुसार, अघिल्लो अध्ययनहरूको डेटाले सेल फोनहरूद्वारा उत्सर्जित RF-EMWs ले तिनीहरूको गतिशीलता, व्यवहार्यता, र एकाग्रता घटाएर शुक्राणुको गुणस्तर घटाउँछ भनेर संकेत गर्छ। यद्यपि, यो मेटा-विश्लेषणमा केही सीमितताहरू थिए, किनकि यसमा भिभो डाटाको कम मात्रा थियो र सेल फोन मोडेलहरू जुन अहिले पुरानो भइसकेका छन्।
थप नवीनतम नतिजाहरू तालिकामा ल्याउने प्रयासमा, पुसान नेशनल युनिभर्सिटी, कोरियाका सहायक प्रोफेसर युन हक किमको नेतृत्वमा अनुसन्धानकर्ताहरूको टोलीले शुक्राणुको गुणस्तरमा सेल फोनको सम्भावित प्रभावहरूमा नयाँ मेटा-विश्लेषण गरे। । तिनीहरूले 435 र 2012 को बीचमा प्रकाशित 2021 अध्ययन र रेकर्डहरू जाँच गरे र 18 फेला पारे - कुल 4280 नमूनाहरू - जुन तथ्याङ्कीय विश्लेषणको लागि उपयुक्त थिए। तिनीहरूको पेपर जुलाई 30, 2021 मा अनलाइन उपलब्ध गराइएको थियो र नोभेम्बर, 202 मा पर्यावरण अनुसन्धानको भोल्युम 2021 मा प्रकाशित गरिएको थियो।
समग्रमा, परिणामहरूले सेल फोन प्रयोग वास्तवमा कम शुक्राणु गतिशीलता, व्यवहार्यता, र एकाग्रतासँग सम्बन्धित छ भनेर संकेत गर्दछ। यी निष्कर्षहरू डेटाको राम्रो उपसमूह विश्लेषणको लागि अघिल्लो मेटा-विश्लेषणको तुलनामा अधिक परिष्कृत छन्। अन्वेषकहरूले हेर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको सेल फोनको उच्च एक्सपोजर समय कम शुक्रकीटको गुणस्तरसँग सम्बन्धित थियो। यद्यपि, उनीहरूले पत्ता लगाए कि शुक्राणुको गुणस्तरमा आएको कमी एक्सपोजर समयसँग सम्बन्धित थिएन - केवल मोबाइल फोनको एक्सपोजरमा। भिभो र इन भिट्रो (कल्चर्ड स्पर्म) डेटा दुवैमा परिणामहरू एकरूप थिए भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै, डा. किम चेताउनी दिन्छन् कि "पुरुष सेल फोन प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो शुक्राणुको गुणस्तर सुरक्षित गर्न मोबाइल फोनको प्रयोग कम गर्न प्रयास गर्नुपर्छ।"
सेल फोन प्रयोगकर्ताहरूको संख्या भविष्यमा बढ्ने सम्भावना छ भनी थाहा पाएर, हामीले पुरुष जनसङ्ख्यामा शुक्रकीटको गुणस्तरमा कमी ल्याउने अन्तर्निहित कारकहरूमध्ये एकको रूपमा RF-EMW सँगको सम्पर्कलाई विचार गर्न थाल्ने समय आएको छ। यसबाहेक, कसरी टेक्नोलोजीहरू यति चाँडै विकसित हुन्छन् भनेर हेर्दै, डा. किम टिप्पणी गर्छन् कि "वर्तमान डिजिटल वातावरणमा नयाँ मोबाइल फोन मोडेलहरूबाट उत्सर्जित EMWs को प्रभाव निर्धारण गर्न थप अध्ययनहरू आवश्यक हुनेछ।" तल्लो रेखा हो, यदि तपाईं आफ्नो प्रजनन क्षमता (र सम्भावित रूपमा तपाईंको स्वास्थ्यको अन्य पक्षहरू) बारे चिन्तित हुनुहुन्छ भने, यो तपाईंको दैनिक सेल फोन प्रयोग सीमित गर्न राम्रो विचार हुन सक्छ।
थप मा: अनुसन्धान
मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रले बिटकोइनलाई यसको नयाँ कानुनी टेन्डर बनाउँछ अनुसन्धान|
बिरामीहरूको लागि नयाँ परीक्षण परिणामहरू ...